नेपाल आज | सिके राउतका समर्थकलाई भेट्न प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री अमेरिका जान खोजेका थिए
सिके राउतका समर्थकलाई भेट्न प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री अमेरिका जान खोजेका थिए
सञ्जीवकुमार झा, सचिवालय सदस्य, युवा संघ
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत अमेरिकामा रहेका सिके राउतका मान्छेसँग भेट्न जान लाग्दा केन्द्र सरकारले उनलाई रोकिदियो । यो त एकदम ठीक भयो । सम्पूर्ण मधेसी जनताको अपमान गर्ने लालबाबु राउत नै हुन् । किनभने छिमेकी देशको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदा उहाँले भन्नुभयो कि मधेसीहरु गरिब छन्, अशिक्षित छन्, उपेक्षित छन् । छिमेकी देशको प्रधानमन्त्री आउँदा मधेसी जनता बिजोगमा छन् भनेर उहाँले मधेसीहरुको बेइज्जत गरिदिनु भयो । उहाँलाई त त्यो अभिव्यक्तिमा दण्ड सजाय दिइनु पर्ने थियो ।
मधेसी एसोसिएसन इन अमेरिका नामक एनजिओ जुन अमेरिकामा छ, त्यसले नेपाल टुक्रा पार्ने उद्देश्य लिएको छ । उसले सिके राउतका लागि काम गर्छ । मधेस टुक्रा पार्ने मिसनमा सहयोग गर्ने गरी यो संस्थाको क्रियाकलाप देखिएको छ । असल नियत भएका मानिसहरुको समूह होइन यो । सच्चा देशभक्त मधेसीहरुले त लालबाबु जस्तो मधेसी कै बेइज्जत गर्नेलाई बोलाउँदै बोलाउँदैन । सिके राउतका समर्थकहरुले मात्रै बुद्धि भुट्न बोलाउने हो ।
विखण्डनको बिउ रोप्ने तरीका सिक्न उनी अमेरिका जान खोजेका थिए, त्यो केन्द्र सरकारले रोकेर राम्रो काम गरिदियो । कुरा यति मात्रै पनि होइन । अहिले बजेटको तयारीमा लाग्नु पर्ने बेला छ । मधेसी गरिब, अशिक्ष, हेपिएका छन् भनेर रुने कराउने काम लालबाबु गर्छन् भने मधेसी जनताको हितका लागि काम किन गर्दैनन् ? उनी मुख्य मन्त्री भएपछि के के गरे ? आन्दोलनमा शहीदलाई ५० लाख दिने भनेका होइनन् ? खै दिएको ?
यो कुरा त अब मधेसी जनताले पनि बुझिरहेका छन् । नाम मधेसी जनताको लिने, तर राजनीति अरु नै कसैको लागि गर्नेहरु पनि छन् । मधेसको दानापानी खाने, मधेसीको भोट लिने अनि मधेसी जनताको नै बेइज्जत गर्ने व्यक्ति मधेसको मुख्यमन्त्री हुनु जति दूर्भाग्य मधेसी जनताको लागि के होला ? तर यस्तो भइ नै सकेको छ । यस्तै तरिका हो भने लालबाबुले आफ्नो दिनगन्ति गर्दा हुन्छ । अरुले सहन सक्छ, तर मधेसीको बेइज्जत गरेको मधेसीले सहन सक्दैनन् ।
देश र जनताको नाममा सपथ खाने, तर काम भने शंकास्पद गर्दै जाने हो भने लालबाबु राउतलाई जनताले सहन सक्दैनन् । प्रदेश नम्बर २ मा सुशासन छैन, विकास छैन । उनले गरेका वाचाअनुसारका काम भएका छैनन् । उनी आफूले गर्नु पर्ने काम त गर्दैनन् । पदीय मर्यादा भूलेर अनावसनाव भाषण गर्दै हिँडछन् । कुटनीतिक मर्यादा र मुख्यमन्त्रीको दायरा नाघेर मोदीको अगाडि मधेसी गरिब छन्, उपेक्षित छन् भनेर किन रुनु पर्यो ? प्रदेशको मुख्यमन्त्री नै विदेशीका अगाडि रुन्छ भने त्यो प्रदेशका जनताले आफूलाई कसरी स्वाभिमानी महशुस गर्ने ?
(युवा नेता झासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)